Waddada Maka Al Mukarama oo maanta Xiran | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Waddada Maka Al Mukarama oo maanta Xiran
Waddada Maka Al Mukarama oo maanta Xiran
A barricade mounted by Somali policemen is seen along a road which was blocked to control motor vehicle traffic, during a security lock down in Somalia's capital Mogadishu, February 7, 2017. REUTERS/Feisal Omar
Waddo xiran Muqdisho. Photo Credit: REUTERS/Feisal Omar
Muqdisho (Halqaran.com) – Ciidamada ammaanka dowladda ayaa Sabtidii maanta xiray wadada muhiimka ah ee Maka Al Mukarama oo dadweynaha si wayn u isticmaalaan.
Xirnaanshaha wadadan ayaa dadka saaka ay ku soo tooseen, iyadoo wado kasta ay taagan yihiin Ciidamada ammaanka oo gaadiidka dagaalka ku jaray wadada.
Sidoo kale, waxaa xiran illaa xaafadda loo yaqaan Galmudug ee ku taallo dhabarka dambe ee Xerada Asluubta, halkaasi oo Ciidamada Booliska Soomaaliya lagu arkaayo.
Sababta loo xiray wadada, ayaa ilo wareedyo waxa ay sheegayaan inay tahay madaxda dowladda Federalka Soomaaliya oo ka qayb galaysa Munaasabada aas aaska Ciidanka Asluubta Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta laga xusaya sanadguuradii 50aad xuska Maalinta Ciidanka Asluubta oo ku beegan 22-February sanadkii 1970kii.
Ugu dambeyn, dadweynaha reer Muqdisho ee shaqooyinka u socda ayaa ah kuwa lugeynaya, maadaama Ciidamada ay xireen wadada oo gaadiidka shacabka aanan la ogoleyn.